Video: Blogs ku qoran af Ingiriisi toos ah | Martech Zone
Fiidiyow: Blogs ku qoran af Ingiriisi toos ah
Arbacada, December 19, 2007 Jimco, Janaayo 6, 2017 Douglas Karr
Fiidiyow kale oo weyn oo ka Farsamada Guud waxaa laga helay addeega blog:
Dhaleeceyn wax dhisid ah, in kasta oo… fiidiyowgaan runtii doontii ku seegay farsamada dambeeya baloog garaynta - waxyaabo sida pings, dib ufiirin iyo hagaajinta mashiinka raadinta.
Blogging-ka waa Shidaalka Sare ee Octane ee Mashiinka Raadinta
Waxa fiidiyowgu uusan lahadlin waa awooda baloog gareynta mawduucyada raadinta natiijooyinka mashiinka. Inta badan ee dadku wax ka qoraan qoraalkaaga bartaada, ayaa dhegeystayaal badan oo aad gaaraysaa. Dhageystayaasha badan ee aad gaarto, ayaa sifiican u qiimeeya mashiinkaaga raadinta. Sida ugufiican ee natiijooyinka mashiinka raadintaadu, ayaa dhagaystayaasha aad ugu badantahay waxaad kuheli kartaa raadinta.
Google wuxuu rabaa inuu dhigo mid caan ah, xiriiriyeyaal tayo leh marka hore markay muujinayaan ereyada muhiimka ah iyo waxyaabaha ay ka kooban yihiin. Markaad haysato dhammaan barta wax qorista ee adiga kugu saabsan - waxay kor u qaadeysaa macluumaadkaaga illaa khadka hore. Dareen ahaan, baloog garaynta ayaa ah shidaalka quudinta mashiinka raadinta.
Maxaa Blog loo qoraa? Maxaa diidaya isku xidhka bulshada?
Dadka qaar waxay isku khaldamaan istaraatiijiyadaha waxayna la yaabaan, “Maxaa diidaya in la dhiso shabakad bulsheed oo dhan, markaa? Haddii baloog garaynta ay u fiicantahay natiijooyinka Mashiinka Raadinta - markaa Shabakadaha Bulshadu waa inay noqdaan wax aan caadi ahayn! ”
U fiirso sida fikraddu udub dhexaad u tahay baloog, qorayaasha isku fikirka ah, iyo akhristayaashooda (dhinaca bidix ee jaantuska). Kani waa waran urursan oo ujeedkiisu yahay xarun dhimatay mowduuca raadiyaha uu raadinayo. Shabakadaha bulshada ayaa leh fikrad - qaarna xitaa waxay leeyihiin baloog gudaha ah (oo u shaqeeya sida caadiga ah balooggu u shaqeeyo), laakiin intabadan shabakadaha bulshada waxay ujiraan raadinta sida dadka, ma ahan udub dhexaad fikrad gaar ah.
Shabakadaha bulshada waa kuwo cajiib ah - Waxaan ka tirsanahay kuwa badan. Laakiin way ka maqan yihiin diiradda mawduucyada iyo ereyada muhiimka ah ee blogku u yeelan karo kobcinta mashiinka raadinta. Blogs waa dariiqa degdega ah ee fikraddaada ama mowduucyadaada la maqlo. Shabakadaha bulshada waa ku fiican yihiin inaad la kulanto oo aad hesho dad adigu oo kale ah.
Tags: blogbaloogyo ku qoran af Ingiriisi cadFiidiyowyada Suuqgeyntawaa maxay baloog
War weyn! Qofna Ma Garanayo Qofka Aad Tahay!
19, 2007 at 9: 18 AM
@Douglas “Dadka qaar ayaa isku qalda xeeladaha oo la yaaba, maxaa diidaya in la dhiso shabakad bulsho oo dhan, markaa? Haddii baloog garaynta ay u fiicantahay natiijooyinka Mashiinka Raadinta - markaa Shabakadaha Bulshadu waa inay noqdaan wax aan caadi ahayn! ”
Anigu maan raacin caqligaas gabi ahaanba. Waan ku raacsanahay qaddiyaddaada in baloogyada iyo shabakadaha bulshadu ay leeyihiin soo jeedin qiimo kala duwan iyo in shabakadaha bulshada aysan u fiicnayn SEO-ga la adeegsado (in kasta oo ay u fiicnaan karaan wax kale oo aan weli la aqoon), laakiin ma aanan raacin sida aad u malaynayso inay dadku sawirayaan khadadka u dhexeeya labada. Runtii weligay maan maqal qof xuso waxaas oo kale…
19, 2007 at 9: 47 AM
Markii aan la hadalno qaar ka mid ah macaamiisha ku saabsan faa'iidooyinka baloog-garaynta, qaar (inta ugu badan) shirkadaha ayaa gadaal ka riixaya inay jeclaan lahaayeen inay dhisaan shabakad bulsheed. Maaddaama qaar ka mid ah shabakadaha bulshada ay ku daraan qorista, waxay u maleynayaan inay tani dhab ahaantii tahay tallaabo kor loo qaaday.
Xeeladaha ka dambeeya mid waliba waa kala duwan yahay, sidoo kale dhagaystayaasha iyo sababta ay u joogaan.
Guntii iyo gaba gabadii waxay tahay in shirkaduhu wali ku jahwareersan yihiin teknoolojiyadan runtiina aysan fahmin kala duwanaanshaha. Waxaan rajeynayaa inaanan iyaga ka sii wareerin!
19, 2007 at 10: 02 AM
Ah, waan arkaa halkaad ka imanaysid hadda. Waxaad ka hadlaysay wadarta rajada neophyte iyo macaamiisha “Maqalka 'isbadalkan cusub ee loo yaqaan' shabakada-gudaha 'oo aad rabto inaad wax iiga hesho ficil' ficil 'sababta oo ah waxaan maqlay waxaan ku garaaci karaa-taajir halkaa. Sidaas ayuu TV-ga ka sheegay”Oo kuma saabsan kuweena sida dhabta ah u fiirsanaya!
(Waan ka xumahay haddii aan wax yar dul maray halkaas oo ku saabsan astaamaha ization 🙂
(PS Ka waran ku darista fiilada horudhaca ah ee faallooyinka halkan ol'blog? Waxaan maqlayaa inaan u sheego qaar ka mid ah blogger-ka oo tixraacay liis ay ku qoran yihiin Top 30 plugins meel. Waxaan sharad ku helayaa inaad ka heli karto mid ka mid ah liiskaas - '-)
19, 2007 at 10: 22 AM
Halkan waxaa ah hal dariiqo oo aan ku sawirayo farqiga u dhexeeya ka faa'iideysiga baraha ganacsiga ee Raadinta iyo Shabakad Bulsho ee Ganacsi.
Intooda badan dadku ma rabaan inay isku qoraan barta ganacsigaaga mana doonayaan inay ku biiraan shabakaddaada bulshada. Ururada u maleynaya in istiraatiijiyad “dhisi doonaan wayna imaan doonaan” waa inay koox uun ka aasaasaan Facebook, waxaad yeelan doontaa fursad aad u sareysa oo aad ku guuleysan karto marka aad isku daydo inaad ka dhigto waxaaga “Meeshaada” meel ay dadku ku noqon doonaan.
Markaad ka fekereyso Blogging Corporate, waa inaad ka fekertaa xaqiiqda ah in dadku mar uun imaanayaan once .waxay baarayaan shaqadaaduna waa inaad hortooda istaagto markay gaaraan bogga natiijooyinka.
Tani waa qiimaha ugu sarreeya ee barta wax lagu qoro
19, 2007 at 12: 27 PM
Taasi waa fikradda 'bog kasta waa bog soo degitaan' waana ku raacsanahay 100%. Si kastaba ha noqotee, iyada oo aan cidina tixraacin, caymis kama bixinaysid meelayntaada waxaadna u oggolaaneysaa kuwa kale inay si fudud kuu dhaafi karaan - adiga ayaa kugu riixaya natiijooyinka. Daqiiqad iyo awood waa xubno muhiim ah oo bixiya awood joogitaan.